Ụlọ ụlọ na -enyocha akpa
Top Entry akpa Myọcha Housing
Ụlọ nbata akpa akụkụ ụlọ
Ụlọ akpa akpa ụlọ
Ejiri ụlọ nyocha akpa akpa
V-mwekota ngwa ngwa mepee ọtụtụ akpa akpa ụlọ
Houselọ ọtụtụ akpa akpa Davit Arm
N'oge opupu ihe ubi na-enyere ụlọ ọtụtụ akpa akpa
Akpa nzacha PO
Akpa nyocha PE
Akpa nzacha POXL
Akpa nzacha PEXL
Akpa Nylon Monofilament
Akpa NOMEX akpa
Akpa nyocha PTFE
Akpa nzacha zuru oke
Akpa nnabata mmanụ
Akpa arụmọrụ dị elu
Akpa nyocha LCR-100
Akpa nyocha LCR-500
Akpa AGF Series
PGF Series Myọcha akpa
Akpa Ncha MAXPONG
Cartridge Filer Vessel
Ụgbọ ala ụgbọ mmiri dị ọkụ
Nnukwu Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọtụtụ Njikere
Sistemu nzacha onwe gị
Ihe nkata nkata
Ngwa na njirimara nke nzacha duplex
site na nchịkwa na 21-06-08
A na -akpọkwa ihe nzacha duplex. Emere ya ihe nzacha igwe anaghị agba nchara abụọ. Ọ nwere ọtụtụ uru, dị ka akwụkwọ akụkọ na ezi uche Ọdịdị, ezi akara arụmọrụ, ike mgbasa ike, mfe ọrụ, wdg ọ bụ a multi-nzube nyo ngwá na wi ...
Automatic onwe ihicha nyo akwado green akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
A bịa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọtụtụ ndị mmadụ na -eche maka isiokwu doro anya dịka okike na nchekwa gburugburu ebe obibi. Green nwere ihe ndụ pụtara na ọdịbendị ndị China, ma na -egosipụtakwa nguzozi nke gburugburu ebe obibi. Agbanyeghị, site na mmepe ụlọ ọrụ na -aga n'ihu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -agbada ...
Ọdịiche dị n'etiti nzacha elu na nzacha miri emi
A na -ejikarị ihe ihuenyo eme ihe maka nzacha elu ma nwee ihe eji eme ya maka nzacha miri emi. Esemokwu ndị a bụ ndị a: 1. Ihe onyonyo (nylon monofilament, monofilament metal) na -egbochi adịghị ọcha na nzacha n'elu ihe ahụ ozugbo. The uru ...
Kedu otu esi ahọrọ nke ziri ezi maka gị?
Nzuzu zuru oke na -ezo aka 100% nzacha nke irighiri akwara nwere ezigbo akara. Maka ụdị nzacha ọ bụla, nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume na enweghị ike, n'ihi na 100% agaghị ekwe omume ime. Usoro nzacha mmiri mmiri ahụ na -esi n'ime akpa nyo gaa na mpụga nke akpa, a ...
Mba 85, Kanggong Road, Qingpu District, Shanghai 201714, PRChina
Tel: +86-21-5923 8005